FSND ဘိုးအင်း 707-420 2013 DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 34.6 ကို MB
downloads ရယူရန္ 54 150
04 / 02 / 2014 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
တင့်တယ်လေယာဉ်ပျံ! ဤတွင်အတောင်ပံနှင့်အခြားမိုဘိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့အပြည့်အဝကာတွန်းနှင့်အတူပြည့်စုံဘိုးအင်း 707 ဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအသံတစ်ဦးကို virtual cockpit, 2D panel ကိုနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူထည့်သွင်း!6repaints: Air ကိုပြင်သစ်, Amercian လေကြောင်းလိုင်း, ထွား, Varig, ပန်လေး, Platano လေကြောင်းလိုင်း။ အတူလိုက်ဖက်တဲ့ FSX - SP2 နှင့် Prepar3D.
မိမိအဝက်ဘ်ဆိုက်ထုတ်စစ်ဆေးသည်, မိမိယဉ်ကျေးခွင့်ပြုချက်အဘို့အ Alejandro Rojas Lucena ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည် http://www.simviation.com/fsnd/